भक्त विश्वासको मर्म स्पर्सी जीवन कथा : घुँडा टेकेर हिँड्न थालेको २२ बर्ष भयो, गायक बन्न ५ बर्ष देखि संगीत साधनामा तल्लिन(भिडियो सहित)
जीवन खै के खै के । नचाहेको जस्तो हुन्छ न सोचेको जस्तो । न खोजेको जस्तो नै हुन्छ । आफुले खोजेको र रोझेको जस्तो नहुँदा जति पिडा मानिसई कहिले हुन्छ र ? सवल हुँदा हुँदै पनि मानिसले चाहेको गर्न सक्दैन भने अशक्त हुँदा के होला ? सायद हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ ।